दम्पतीबीच कस्तो अवस्थामा शारीरिक सम्बन्ध बनाउन हुँदैन ? | सुदुरपश्चिम खबर
दम्पतीबीच कस्तो अवस्थामा शारीरिक सम्बन्ध बनाउन हुँदैन ?
अक्सर दम्पतीले रातको समयमा शारीरिक सम्बन्धका लागि उपयुक्त मान्ने गर्छन् । शारीरिक सम्बन्ध पछि उनीहरु नुहाउने अनुकुलता मिल्दैन । यद्यपि शारीरिक सम्बन्धपछि यौनाङ्गको सरसफाई भने अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्छ । अनलाइनखबर बाट सभार